Amin’izao Fotoanan’ny Korontana Izao, Mandrava Sisintany sy Rindrina ny Mozika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2017 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, عربي, Español
“Ity ilay rindrina
Manasaraka ny fiainanao amiko
Ity rindrina voaozona ity
Izay manakana antsika tsy hifanantona
Izay hogoanako indray andro any
Ho hitanao, ry fitiavako,
Hiverina ianao indray andro any.”
Tamin'ny 8 Novambra 2016, nandresy i Donald Trump, nandrava ireo tombatombana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Etazonian'i Amerika. Tamin'ireo fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevitra, niteraka ahiahy sy fahatezerana teo amin'ny vahoaka Meksikana indrindra ny iray tamin'ireo fampanantenany: ny fananganana rindrina lehibe eo amin'ny sisintanin'i Meksika sy Etazonia. Araka ny hevitr'i Trump, hanampy hanatsahatra ny fifindramonina tsy ara-dalàna izany ary handamina ny fandalovan'ireo “bad hombres” (mpanolana sy mpanao trafika rongony) ao amin'ny sisintanin'ny Vondrona Amerikana.
Tsy fampanantenana tamin'ny fifidianana intsony ny fananganana izany rindrina tsy noheverina izany. Nandeha ny andro, toa hita fa hotanteraka ity zavatra tsy nampoizina ho vita ity noho ny fahatongavan'ny filoha Trump ao amin'ny Trano Fotsy.
Satria miteraka adihevitra eo anivon'ny kilasy politika ny fanapaha-kevitra tahaka izany, nisy akony teo amin'ireo mpanohitra izay tsy nitsahatra nanao fihetsiketsehana teny an-dalamben'i Etazonia sy ny tanàna hafa manerantany, tsy mitsahatra ny fifanakalozan-kevitra ara-kolontsaina eny amin'ny toeran-kafa. Hita indrindra izany tamin'ny alalan'ny hetsika Oniversity of Michigan En Español: feon'ny tontolo mpiteny Espaniola, nokarakarain'ilay mpitendry piano Kolombiana César Cañón. Nandritra ny herinandro, sehatry ny fampisehoana rindran-kira, master classes sy valandresaka ny Oniversiten'i Michigan izay nahafahana nanao fifanakalozan-kevitra sy nampiray ireo firenena samihafa amin'ny alalan'ny vokatra ara-kolontsaina sy mozika avy ao Amerika Latina sy Espaina. Amin'ny mozikan'ireo mpamoron-kira sangany ao amin'ny faritra, tahaka an'i Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Manuel Ponce na ilay ‘Espaniola Joaquín Turina, Ricardo Lorenz, Carolina Heredia, Edwin Guevara Gutierrez na koa Marcos Balter, nahafahana nandinika sy nihaino ny feo sy ny mozika manako amin'izao fotoanan'ny korontana izao ny fihetsiketsehana.
Ao anatin'ity lahatsary manaraka ity, mamarana ny fampisehoany amin'ny “Me duele el alma” an'ilay mpamoron-kira Kolombiana Gentil Montana ny feon'olondroan'i Villalobos :
Ny fandraisana anjaran'ilay Kolombiana mpitendry piano Alejandro Roca, ny feon'olondroa Villalobos, ilay mpihira Pôrtôrikàna Ricardo Lugo ary ilay Venezoeliana mpitendry lokanga Horacio Contreras, ankoatra ny hafa no nitambatra tamin'ny fiarahamiasan'ireo mpanakanto sy ireo fikambanana ao Etazonia tahaka ny Khemia Ensamble, fitambaran'ny mozika barôka sy ny Oniversity Philharmonia Orchestra ao amin'ny Oniversiten'i Michigan. Tao anatin'izany fisainam-piaraha-miasa manakaiky ny mozika izany no nahitanay ohatra tsara manamafy kokoa ny fiarahamonina : ny fanajana sy ny asa ifarimbonana. Tsy hay ny mihevitra izany fisantarana andraikitra izany raha tsy maharaka ny zava-misy ara-politika tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, raha mihamirindrina hatrany ireo sisintany, amin'ny fitadiavana ny fahasamihafana ho sehatra ifandirana.
Ear, Skin and Bone Riddles, an'ilay mpamoron-kira Breziliana Marcos Balter, no iray amin'ireo sanganasa notanterahan'ny Khemia Ensemble nandritra ny rindrankira naharitra fotoana lava tao amin'ny Oniversiten'i Michigan ao Ann Arbor.
Sarotra ny manasaraka ny mozika ankehitriny rehefa tonga. Angamba satria ny ny tsy fananam-batany no mahatonga azy ho mora andairan-javatra hafa, indraindray miharihary fa mampanahy hatrany. Angamba izany, raha iadian-kevitra ny mety ahafahana manasaraka an'i Etazonia amin'i Meksika sy i Amerika Latina, no mahatonga ireo feo tsy mitsahatra havezivezin'ny hiriky ny rindrina, izay mbola tsy voatsangana akory ary alohan'ny hahavitany, efa voahodidin'ny andaniny sy ankilany sahady.
Shily 5 andro izay